नवलपुर क्षेत्रमा १४ करोडको सुविधा सम्पन्न होटल बन्दै – .:: Welcome to Saurahaonline.com |
नवलपुर क्षेत्रमा १४ करोडको सुविधा सम्पन्न होटल बन्दै
२० आश्विन २०७४, शुक्रबार १५:२८
चितवन २०, असोज । नवलपरासीको मध्यविन्दु नगरपालिका वडा नं. ३ ब्रहमस्थानमा १४ करोडको लगानीमा सुविधा सम्पन्न होटल निर्माण हुँदैछ । नारायण नदी किनार क्षेत्रमा दशकट्ठा साढे १७ धुर जग्गामा चितवनका युवा होटल व्यवसायी सुरेन्द्र चौधरीले सुविधा सम्पन्न होटल निर्माण गर्न लागेका हुन । होटल ग्रीन भिल्ला प्राइभेट लिमिटेड नाम दिइएको उक्ता होटलको निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ । अहिले डिपिसीको काम भइरहेको होटल व्यवसायी सुरेन्द्र महतोले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार ३० वटा फुल एयरकन्डीसन सहितको सुविधा सम्पन्न रुम, ३ सय क्षमता भएको सेमिनार हल, १ सय जना क्षमता भएको रेष्टुरेन्ट सहितको होटल निर्माण हुनेछ । होटल भित्रै स्वीमिङ पूल, फिट्नेस सेन्टर, सानो स्केलको सपिङ सेन्टर, थारु समुदायको परम्परागत खानाको व्यवस्थापन हुनेछ । यस्तै नारायणगढको पुल देखि होटल सम्म दैनिक ¥याफ्टिङको व्यवस्था,साईकिलीङ टुर, जीप सफारी, हात्ती सफारी लगायतको व्यवस्थापन गरिने हुँदा सोही अनुसारको संरचनाहरु निर्माण भइरहेका छन् । होटल परिसर भित्रै मनि एक्सचेन्ज काउण्टर, एटीएमको व्यवस्थापन हुने गरी होटलको संरचना तयार भइरहेका छन् ।
पाँच महिना भित्र होटल संचालनमा ल्याउने तयारी अनुसार निर्माणको काम धमाधम भइरहेको व्यवसायी महतोले जानकारी दिनुभयो । यो योजना सुरु भएलगतै पश्चिम चितवनको पटिहानीमा पनि सुविधा सम्पन्न होटल निर्माणको काम सुरु गर्ने तयारी छ । पश्चिम चितवनको पटिहानी स्थित राप्ती नदी किनार नजिकै होटल निर्माणकै लागि ४ विगहा १ कट्ठा जग्गा खरिद गरिसकेका छन् ।
पश्चिम चितवनमा मात्रै करिब ६० करोडको लगानीमा होटल निर्माण गर्ने योजना छ । यो होटल पनि चितवनकै नमुना र सुविधा सम्पन्न होटल बनाउने पूर्व योजना अनुसार जग्गा खरिद गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
को हुन सुरेन्द्र चौधरी ः चितवनको सौराहामा जन्मीएका ३५ वर्षीय युवा सुरेन्द्र महतोको नाम अहिले चर्चामा छ । थोरै समयमा प्रगती गर्ने युवाहरुको पंत्तीमा उनको नाम अगाडी छ । महतोले २०५८ सालदेखि व्यवसायीक यात्रा सुरु गरेका थिए । सुरुमा हिमालय एक्सर्पोल्स टुर्स एण्ड ट्राभल्र्स काठमाण्डौं जागिरे थिए ।
झण्डै दुई वर्ष काम गरेर अनुभव लिए । काठमाण्डौंमा बसेर ट्राभल्र्स एजेन्सीमा काम गरेका महतो ६० सालमा पुन चितवन फर्कीए । चितवन फर्कीएका महतोले घरमै सामान्य रेष्टुरेन्टको सुरुवात गरें । नेपाली पाहुनालाई नै लक्षित गरेर नेपाली खाना, सुकुटी, चाउमिन लगायतका परिकार विक्री गरेर होटल क्षेत्रमा अनुभव लिन थालें ।
पछि २०७० सालमा सुरेन्द्र महतोको आफ्नै लगानीमा सौराहामा होटल स्वस्तीक संचालनमा आयो । होटल स्वस्तीक लज एण्ड रेष्टुरेन्ट संचालनको अनुभवले उनलाई थप हौसला मिल्यो । दुईवर्षको अवधिमा नवलपरासीको मध्यविन्दु नगरपालिकामा होटल संचालनकै लागि दशकट्ठा साढे १७ धुर जग्गा खरिद गरेर होटल निर्माणको काम भइरहेको छ ।
यो बीचमा पश्चिम चितवनको पटिहानीमा पनि उनले जग्गा खरिद गरेका हुन । अहिले भरतपुरको हाकिम चोकमा कार्पोरेट कार्यालय राखेर होटलमा पाहुना पठाउने काम भइरहेको छ । कर्पोरेट कार्यालय सँगै ग्रीन सफारी टुर्स एण्ड ट्राभल्र्सको नाममा आफ्नै ट्राभल्र्स कम्पनी संचालनमा समेत ल्याएका छन् । चितवनको भरतपुरबाट संसारभर घुम्न जाने व्यवस्थापन समेत ट्राभल्र्स एजेन्सी मार्फत हुँदै आएको छ । ((०))